हाम्रोबारे - मेरो मुद्रा बनाउने ब्लग
म जोनाथन छु, हाल 23 वर्ष पुरानो र सात बच्चाहरु संग परिवार हुर्के. ठूलो भाइ रूपमा, म ठूलो उदाहरण निर्दिष्ट गर्न चाहन्थे. तर उद्देश्य कसरी ठूलो छ. कलेज सिस्टम मेरो कल्पना मा एक हमला थियो र जीवनको लागि zest.
समय मार्फत म ठूलो चिह्न एक महान सम्झौता सिकें र पायो, त्यहाँ बस केहि छुटेको थियो… त्यो हो किन म यो सबै के. म ठ्याक्कै यो निकट भविष्यमा एक धेरै स्पष्ट दृष्टि छैन, तर ठीक दुरुस्त नै समय मा म म विद्यार्थी क्षण धेरै मजा आयो भनेर भन्न सकेन. यो साहसी भएको र म मेरो आफ्नै विकास मा हिचकते महसुस थियो भनेर.
त्यसपछि केही भन्ने मलाई विश्वास मेरो सम्पूर्ण जीवन छोड्न सक्छ देखा .
मेरो आमाबाबुले फ्रान्स ू गर्ने छनौट. तिनीहरूलाई संग धारणा आए जीवन घृणित छ भने कि, यो कल्पनामा साँचो आउन बनाउन मौका छ. म तिनीहरूलाई देखि लियो कि बुद्घि मेरो आफ्नै स्पिन दिइएको.
भावुक बारेमा सबै कुरा जो क्यासिनो हुन्छ, यो Gallant मान्छे म्याच मा आफ्नो साहसिक बारेमा लेख्छन्. एक स्लट मिसिन को एक समीक्षा, यो क्यासिनो को पर्खालहरु भित्र आफ्नो अद्भुत अनुभव गर्न. Gallant रूपमा उहाँ रूपमा, उहाँले इन्टरनेट क्यासिनो विषयमा लेख्न नहिचकिचाउनुहोस् छैन र अनलाइन यी सत्र समयमा उहाँले मुठभेड़ों सबै clarifies. यसबाहेक, यो Gallant व्यक्ति प्रत्येक लागि भाडामा सकिएन (व्यक्तिगत ) उत्सव. उहाँले सेवा-उन्मुख कुराको राम्रो हेरचाह लिन्छ: कोट को अनुमोदन मा सञ्चालन मा